Yaa fulinta ah, ma RW-ha mise Madaxwaynaha.? | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Yaa fulinta ah, ma RW-ha mise Madaxwaynaha.?
Yaa fulinta ah, ma RW-ha mise Madaxwaynaha.?
Waxaa jirta arrin aad loo dhayalsanayo, mustaqbalka dhowna ay suurtagal tahay in ay khilaaf curiso, haddii aan si cad loo bayaanin, taasoo ah; awoodaha isku milqan ee Madaxwaynaha & R/wasaaraha.
Shirarka siyaasadeed ee madaxda Dowladdu ay la galayaan madaxda dalalka kale, Madaxwaynaha & Raysul wasaaraha yeey tahay inuu qaabilo.?
Soomaaliya, waxaan leedahay system baarlamaani ah, laakiin waxaan u dhaqanaa sida Dowlad Madaxwaynuhu shacabka ay soo doorteen, oo madaxweynuhu awood leeyahay.
Shaqada waa la kala leeyahay, Raysul wasaaraha isaga ayaa madax ka ah fulinta, Madaxwaynaha wuxuu huwan yahay astaanta Qaranka, waana ilaaliyaha sharciga, sooma fara gashan karo howsha fulinta.
Madaxweyne MC Farmaajo wuxuu tegay Asmara, wuxuu u tegay
shir siyaasadeed, isaga miyaa leh awoodad fulinta.?
Ku tumashada Dastuurka waxaa qeyb wayn ka ah, bulshadeena oo ah kuwa Dastuurka akhrin, ama warbaahinta oo ah tan u dhexeysa shacabka iyo Dowladda oo kaalintaas ka gaabisay, haddii hay’adaha Dowladda tan Dastuurka ku xadgudubta la tilmaami lahaa, qaladaad tiro badan oo dhacay ma dhici lahayn.
EEG: Awooddaha Madaxwaynaha & R/wasaaraha, ee Dastuurku ku qeexan:
Qodobka 90aad. Xilka iyo Awoodaha Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Awoodaha iyo xilka Madaxweynaha waxaa ka mid ah:
(5) Wuxuu xilka ka qaadayaa Wasiirrada, Wasiiru-dawleyaasha, iyo Wasiir-kuxigeennada, markuu soo jeediyo Wasiirka Koowaad.
(9) Wuxuu la hadli karaa Golaha Shacabka mar kasta oo kale. Guddiga Dib-u-habeynta Qabyoqoraalka Dastuurka 38
(11) Wuxuu magacaabayaa jagooyinka sare ee Xukuumadda Federaalka iyo madaxda Hey’adaha Dawladda Federaalka, marka uu soo jeediyo Golaha Wasiirradu.
(16) In uu cafis u fidiyo ama ciqaab ka dhimo dembiilayaal marka uu ka taloqaato Guddiga Adeegga Garsoorka.
CUTUBKA SIDDEEDAAD: LAANTA FULINTA Qodobka 97aad.
(4) Xil banneeynta jagada Ra’iisul-Wasaaraha oo sababaysa dhicitaanka Golaha Wasiiradda, waxay ku imaan kartaa istiqaalad, xil ka qaadid, xil gudasho la’aan iyo geeri.
Previous articleSucuudiga ma wuxuu ku dhawaaqay cunaqabateyn ka dhan ah Turkiga?
Next articleCiidamada Dowlada Siomaaliya oo Bur buriyey Xarumo dhowr ahoo Alshababa .la heyd